China na-ekpo ọkụ ire ere ọnụ ala ụmụaka skuuta / 2 wiil ụmụaka igba skuuta na handlebar / kacha mma scooters maka ụmụaka bike emepụta na suppliers | Ọmarịcha Bike
na-ekpo ọkụ ire ọnụ ala ụmụaka skuuta / 2 wiil ụmụaka igba skuuta na handlebar / kacha mma scooters maka ụmụaka bike
Nchara na-enweghị isi, naịlọn, pp
ụmụaka ọnụ ala skuuta / eyen igwe kwụ otu ebe scooters / ụmụaka igba skuta
agba ọ bụla ị chọrọ
Pink ma ọ bụ agba ọ bụla ị chọrọ
10000 Ibe / iberibe kwa ụbọchị ụmụaka ọnụ ala skuuta / ụmụaka igwe kwụ otu ebe scooters / ụmụaka igba skuta
1piece / igbe, 4 / 6boxs / katọn, En 14619 na-ekpo ọkụ ire ọnụ ala ụmụaka skuuta / 2 wiil ụmụaka igba skuuta na handlebar / kacha mma scooters maka ụmụaka bike
tianjin n'ọdụ ụgbọ mmiri
Est. Oge (ụbọchị) 30 Ndi kpakorita
Quality ụmụaka skuuta: na skuuta bụ ọhụrụ ezigbo onye na-agba ịnyịnya, obi ụtọ na-achọ 2 wheel skuuta. Gbaa ịnyịnya na style na ìhè elu wiil na yi aghụghọ. Emere ihe na-adịgide adịgide nke a na-ewu iji mee ka ọchị bụrụ nke ikpeazụ!
Inogide ígwè etiti & kemeghi handlebars: na skuuta e wuru Ikpeazụ ya zuru ígwè etiti na ígwè na-akwado ọtụtụ ihe mejupụtara oche. Ọbụghị naanị na aka na - emegharị emegharị emegharị maka ụmụaka na obere ụmụaka, aka ahụ na - ejikwa aka njigide omenala nke dị mma ma dị mma mgbe ịnya. Ntọala abụọ nwere ike idozi site na 27.5 "ruo 32".
Adịgide teepu Ekpuchi ekpuchi oche na jụụ aghụghọ: The wheeled skuuta atụmatụ a adịgide adịgide teepu Kpuchie oche maka kacha kwụsie ike na-achịkwa mgbe skuuta ma na-enye skuuta a jụụ na pụrụ iche anya n'adịghị ihe ọ bụla ọzọ skuuta si n'ebe! Ndị skuuta ahụ nwere agba dị iche iche; acha anụnụ anụnụ, oroma, pink na na. Onye ọ bụla na-egosipụta ihe ngosi teepu ya pụrụ iche.
Easy iji n'azụ breeki na ìhè elu wiil: The wheeled skuuta atụmatụ a nnukwu, ígwè N'azụ ụkwụ breeki maka a ngwa ngwa, mma ma dị mfe nkwụsị. Wheelsgbọ ụkwụ abụọ ahụ na-enwupụtakwa mgbe ị na-agba ịnyịnya!
Nnukwu wiil 125mm buru ibu na 5 biarin: na-agba ọsọ ọsọ na nwayọ na nnukwu 125mm PU anyị na ogo 5 biarin.
Katọn Nha Otu katọn (PC) / kg Ọnụ ọgụgụ / katọn Ọnụ ọgụgụ/ PC Ọnụ ọgụgụ / n'arọ
65 * 25 * 25cm 20 PC / 19kg Ogbe 729 14580PC 13851 n'arọ
65 * 25 * 35cm 10pcs / 9kg 567 katọn 5670 PC 5103 n'arọ
65 * 25 * 30cm 60pcs / 11kg 648 katọn 38880pcs 7128kg
73 * 40 * 25cm 10pcs / 11kg 432 katọn 4320 PC 4752 n'arọ
43 * 33 * 34cm 40pcs / 10kg 637 katọn 25480pcs 6370kg
Usoro & Ọrụ
Oge Mbuga ozi 20-35ụbọchị mgbe nnatatinye ugwo nke nkwụnye ego 30%.
Kwụ ụgwọ -Ienweghị ike ịgbanwe L / C na anya.
-30% T / T tupu na 70% itule megide oyiri nke B / L.
-Ebube D / P. na anya.
Mbukota -Otu set kwa ọkọlọtọ mbupụ ọkọlọtọ.
-85% SKD, 50% SKD na CKD.
-Dabere na ahịa arịrịọ.
Anyị ji obi anyị niile na-akpọ gị ka ị hapụ anyị ezigbo nzaghachi ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke anyị pmkparauOnwu. Ọ bụrụ na ị nwere ọ bụla ajụjụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla o kwere omume.
Mgbe ire Ajuju obulas nke mmepụta, biko mee ka m mara site na email ma ọ bụ ekwentị. We nwere ike ịnagide nsogbu ndị a n'oge, nkwa na-enye gị azịza obi ụtọ.
We lekwasịrị anya na mgbe sale. WNabata zitere anyị ihe ọ bụla.
Nke gara aga: Safety ụmụaka wiggle ụgbọ ala maka nwa / Baby plasma ụgbọ ala price ke factory / ụmụaka ighikota ụgbọ ala maka ụmụaka nọkwasị na
Osote: na-ekpo ọkụ ire nwa na-acha uhie uhie igba skuta / mini wheel itule skuuta na Pu wheel / 3 wheel nwa skuuta